Madaxweynaha Hirshabelle oo sheegay in afarta dekadood ee Itoobiya maalgashaneyso Cadale kamid noqoto • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hirshabelle / Madaxweynaha Hirshabelle oo sheegay in afarta dekadood ee Itoobiya maalgashaneyso Cadale kamid noqoto
June 19, 2018 - By: Mohamed Jeenyo
Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Maxamad Cabdi Waare ayaa ka hadlay heshiiska dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya. Wuxuu sheegay in maamulkooda dan weyn ugu jirto xiriirka labada dal oo wanaagsaada, heshiiskana uu yahay waa cusub oo u baryey Soomaaliya
“…Anaga haddii aan nahay hirshabelle waxaan ku naala xuduud, waxaan aad u jecel nahay in la furo kastamkii Feer-feer, ganacsigu isu furmo, waxaan ku hawlgelynaa in afarta dekadood in mid kamid ah ay noqoto dekadda cadale ayuu yiri.
“…Waxaa aaminsanahay in Dekeda Cadale laga dhisayo ay noqoto afarta dekeda ugu horeysa, Dekedaas ay noqoto deked Lojisticik, in jid laga bixiyo, Jid Tareen laga bixiyo, anaga Hirshabeelle ahaan waxa anoo muuqda horumar weyn” ayuu yiri Madaxweynaha Hirshabeelle.
War murtiyeedkii ka soo baxay shirkii Madaxweynaha Soomaaliya iyo raysalwasaaraha Itoobiya ayaa lagu sheegay in labada dal isla maal gashanayaan afar dekadood oo muhim ah, kuwaas o aanla xusin magacyada goobaha ay ku yaalaan. Dalka Itoobiya ayaa tirada dadkiisu kor u kacdey waxaana la qiyaasaya 2030 in ay gaari doonaan 120 milyan oo qof. Itoobiya malahan dekad iyo xeeb kadib amrkii Ereteeriya ay noqotey dal ka madax banaan itoobiya sanadkii 1991.